Sharing For All: Google မှာ ဘယ်လိုရှာကြမလဲ
Google မှာ ဘယ်လိုရှာကြမလဲ
ကျွန်တော်တို့တတွေ တခုခု လိုချင်တာ သိချင်တာ ရှိရင် အင်တာနက်ရှာဖွေရေး အင်ဂျင် Google မှာ သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေး စာသားလေးကို ရိုက်ထဲ့ပြီး ရှာလိုက်တာများပါတယ်..အဲဒီတော့ Google ကလည်း မလိုတာတွေရော လိုတာတွေရော ရှာပေးတော့တာပါပဲ ...
တကယ်တမ်းကျတော့ အင်တာနက်သုံးနေရတဲ့ အချိန်တွေဟာ အလွန်ပဲတန်ဘိုးရှိလှပါတယ်...
ကိုယ်လိုချင်တာလေးတစ်ခုရဖို့ အများကြီးမူးနောက်နေအောင် လိုက်ရှာနေရတယ်ဆိုတာ အချိန်တွေရော လုပ်အားတွေရော အင်တာနက် Bandwidth တွေရော အစစ အရာရာ နှမြောစရာတွေချည်းပါပဲ ....
အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့လို အင်တာနက်အသုံးပြုခ ဈေးကြီးနေသေးတဲ့ နေရာတွေအတွက်ဆိုရင် ပိုပြီး နှမြောစရာပါ...
အဲဒါကြောင့် Google ကိုသုံပြီးလိုချင်တာတွေ အမြန်ရှာနိုင်တဲ့ နည်းလေးတွေ ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်...
ရှာဖွေလိုသော အကြောင်းအရာများကို အုပ်စုဖွဲ့ပါ။ ဥပမာ - ကွန်ပျုတာနှင့် သက်ဆိုင်သော အလုပ်အကိုင်များ ရှာလိုပါက ယခုကဲ့သို့ " computer jobs "ဟု မျက်တောင်ကွင်း အဖွင့်အပိတ်အတွင်း ထည့်သွင်းပြီးရိုက်ထည့်ကာ ရှာနိုင်သည် - (လက်တွေ့ရှာပြထားပါသည်)
Results 1 - 10 of about 377,000,000 for computer jobs. (0.22 seconds)
Results 1 - 10 of about 777,000 for " computer jobs ". (0.22seconds)
မိမိရှာတွေ့သောအဖြေများတွင် မလိုချင်သော သော့ချက်စကားလုံးများ (Keywords)များ ပါဝင်နေပါက “ အနှုတ် ” လက္ခဏာ ကို သုံးပြီးလျော့ချ ဖယ်ရှားနိုင်သည် - ဥပမာ -
Results 1 - 10 of about 482,000 for " computer jobs " - webdesigner. (0.43 seconds)
Results 1 - 10 of about 306,000 for " computer jobs " - webdesigner - programmer . (0.15 seconds)
Google သည် ကိန်းဂဏန်းအစဉ်များကိုလည်း ရှာဖွေပေးနိုင်သည် - ဥပမာ -
Results 1 - 10 of about 37,100 for " computer jobs " 2005 ... 2008. (0.16 seconds)
Results 1 - 10 of about 19,100 for " computer jobs " - webdesigner 2005 ...2008. (0.16 seconds)
အောက်ပါ အော်ပရေတာ စာလုံးများကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည် -
cache: ဥပမာ- cache:www.google.com web
link: ဥပမာ - link:www.google.com
related: ဥပမာ - related:www.google.com
info: ဥပမာ - info:www.google.com
define: ဥပမာ - define:networking
stocks: ဥပမာ - stocks: intc yhoo (ticker symbol ကိုသုံးရသည်)
site: ဥပမာ - help site:www.google.com
allintitle: ဥပမာ - allintitle: google search
intitle: ဥပမာ - intitle:google search
allinurl: ဥပမာ - allinurl: google search
inurl: ဥပမာ - inurl:google search
သတိပြုရန်မှာ “ : ” နှင့် အခြားစာလုံးများကြားတွင် နေရာလွတ် Space မရှိစေရန်ဖြစ်သည်
Google features page တွင် ပေးထားသော ဥပမာများကို လေ့လာအသုံးပြုနိုင်သည်-
နမူနာဖော်ပြထားသော စာကြောင်းများ -
Posted by Coralchitthu at 9:04 AM
ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအဖျက်သဘောနဲ့ မေးခွန်းတွေမေးလာခဲ့ရင် ပြန်လည်ဖြေကြားနိုင်ရန်အတွက်ဒီပိုစ့်ကို ထပ်ဆင့်မျှဝေ ပေးလိုက်ပါသည်..။။ (၁) - ဗုဒ္ဓဘာသာဆို...
our passwords ( 1 )
Autodesk 3ds Max 2013 + Keygen
ကွန်ပျူတာမြန်စေရန် နည်းလမ်း ( ၇ ) ချက်
Questions and Answers for computer problem